Kooxda Macaawiisley oo sheegtay inay Awood Ku siidaayeen dad u xirnaa Al-Shabaab – Wakaaladda Wararka Hiilnews
Kooxda Macaawiisley oo sheegtay inay Awood Ku siidaayeen dad u xirnaa Al-Shabaab
Kooxda Mucaawiisley oo ah Shacab is aruursaday oo hubeysan lana dagaalamaya Al-Shabaab ayaa waxaa ay sheegeen inay siidaayeen tiro dad ah oo ay Al-Shabaab ku xirteen deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan.
Horjoogayaasha Kooxda Macaawuusleey ayaa waxaa ay sheegeen in ay weerareen saldhigyo ay Al-Shabaab ku lahaayeen tulooyin hoostaga degmada Buulo-Burde ee Gobolka Hiiraan,isla markaana ay kasoo badbaadiyeen dad ay Maxaabiis ahaan u heysteen, akdib dagaal ka dhacay halkaas.
Mid ka mid ah horjoogayaasha ayaa waxaa uu sheegay in in ka badan 30 ruux ay ka siidaayeen Xabsiyada Al-Shabaab ee duleedka Buulo-Burde,isla markaana ay u badnaayeen dadkaasi beeraleey.
Waxaa uu sidoo kale intaasi ku daray hadalkiisa in tallaabadaas ay ka dambeysay, kadib markii ay cabasho kasoo gaartay dadka Shacabka,isla markaana ay weerarkaas kula wareegeen saldhigyada Ururka Al-Shabaab.
Marka laga soo tago warkaan kasoo baxay Kooxda Mucaawiisley oo ah Shacab is aruursaday oo hubeysan ayaanan jirin ilaa iyo hadda War kasoo baxay dhanka Al-Shabaab laguna faah faahiyay dagaalka ka dhacay Gobolka Hiiraan.
Kooxda Macaawiisley oo sheegtay inay Awood Ku siidaayeen dad u xirnaa Al-Shabaab added by admin on 24/06/2019